Ikea फर्नीचर र्याक वा भांग संग ह्याक्स बेजिया
मारिया vazquez | 10/09/2021 18:00 | आफै गर
अंग्रेजी मा सर्तहरु अधिक र अधिक हरेक दिन हाम्रो शब्दावली मा उपस्थित छन्। र यद्यपि हामी जान्दैनौं कि उनीहरु मध्ये धेरै लाई कसरी अनुवाद गर्ने, हामी उनीहरुलाई एक विशिष्ट गतिविधि संग जोड्न सक्षम छौं। यो शब्द ह्याक संग हुन्छ, परिवर्तन र रूपान्तरण संग धेरै को लागी सम्बन्धित छ कि सामान्यतया रचनात्मक मान्छे स्वीडिश विशाल को फर्नीचर मा बाहिर ले।
आज त्यहाँ Ikea फर्नीचर परिवर्तन गर्न नेट मा धेरै विचारहरु छन्। यी Ikea फर्नीचर ह्याक्स को धेरै एक विशिष्ट सजावट प्रवृत्ति जस्तै यस मामला मा भांग को रूप मा आधारित छन्। र त्यो हो विकर ग्रिड वा भांग संग फर्नीचरउनीहरु चार बर्ष पहिले फैशनेबल बनेका थिए र आफ्नो शक्ति गुमाएका छैनन्।
1 भांग प्रवृत्ति
2 Ikea फर्नीचर भांग संग ह्याक
2.2 बिली / अक्सबर्ग बुकस्टोर
हामी याद गर्न 2017 मा फिर्ता जानु पर्छ भांग फर्नीचर को बूम। त्यसोभए, सजावट को दुनिया, तर न केवल सजावट को दुनिया, एक पटक फेरि प्राकृतिक, कारीगर द्वारा बहकाएको थियो ... र डिजाइन फर्महरु आफ्नो संग्रह मा फर्नीचर को यस प्रकार को शामिल गर्न संकोच थिएन।
भांग, जस्तै यो सामान्यतया भनिन्छ ब्रेडिंग प्रविधि, भर्खरैका वर्षहरुमा फरक फर्नीचर संग्रह बनाउन को लागी दर्जनौं डिजाइनरहरुलाई प्रेरित गरेको छ। र हामी आश्चर्यचकित छैनौं किनकि यो रतन ग्रिड फर्नीचर को लागी एक अद्वितीय व्यक्तित्व र गर्मी दिन्छ।
रतन वा विकर ग्रिड उनीहरुले विभिन्न DIY आंकडाहरुको ध्यान पनि खिचेका छन्। र मूल्य कि cannage फर्नीचर सामान्यतया पुग्छ देखीन्छ, धेरैले यस प्रकारको प्रोजेक्ट मा देखेका छन् यो मात्र तरीका हो यो आफ्नो घर मा समाहित गर्ने। र यो हो कि भांग संग काम गरीरहेको छ र यस सामग्री र फर्नीचर र स्क्रैच बाट घर सामान संग निजीकृत, अपेक्षाकृत सजिलो छ, के रूप मा तपाइँ प्रमाणित गर्न को लागी समय हुनेछ।
Ikea फर्नीचर भांग संग ह्याक
त्यहाँ कैनेज संग अनगिन्ती Ikea फर्नीचर ह्याक्स छन्। हामी, सामान्य जस्तै, हाम्रो मनपर्ने छनौट गरेका छौं। हामीले यो Ikea फर्नीचर को मूल मूल्य विचार गरीएको छ ताकि उनीहरु सुलभ छन् र परियोजना को कठिनाई।
क्यानाज संग काम गर्नुहोस्हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, यो जटिल छैन, तर तपाइँ यो गर्न को लागी खाता मा धेरै चीजहरु लिनु पर्छ। सामग्री को कठोरता मा निर्भर गर्दछ र ढाँचा मा यो प्रस्तुत गरीएको छ, यो यो न्यानो पानी मा भिजाउन को लागी यो सजीलो खिच्न वा यो मोडेल बनाउन को लागी, तपाइँ यसलाई कल गर्न चाहानुहुन्छ। यसको अतिरिक्त, यो धेरै ध्यान दिईएको सही चिपकने वाला छनौट गर्न को लागी महत्वपूर्ण हुनेछ - यदि तपाइँ चिपकने वाला को उपयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ - सधैं दुबै ग्रिड र सतह मा मनमा राख्नु हुन्छ जसमा तपाइँ टाँस्न चाहानुहुन्छ।
IVAR भण्डारण प्रणाली यो यति व्यावहारिक छ कि यो Ikea ग्राहकहरु को विभिन्न आवश्यकताहरु लाई ५० बर्ष को लागी प्रतिक्रिया दिईरहेको छ। ठोस अनुपचारित काठ, एक धेरै टिकाऊ र प्रतिरोधी प्राकृतिक सामग्री हो कि तपाइँ तेल वा मोम लागू गरेर हेरचाह गर्न सक्नुहुन्छ, Ivar अलमारी यस श्रृंखला मा सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो। 80x30x83 सेमी मापन, यो दुई शेल्फ कि तपाइँ आफ्नो आवश्यकताहरु को लागी ठाउँ अनुकूल गर्न सार्न सक्नुहुन्छ। र यो मात्र costs ५ costs खर्च हुन्छ।
क्यानाज संग यो कोठरी अनुकूलन धेरै सरल छ किनकि यसले हामीलाई देखाउँछ सेप्टेम्बर सम्पादन तपाइँको ट्यूटोरियल मा। उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो जसले हामीलाई यो संयोजन को संभावनाहरु पत्ता लगाउनुभयो र जो यो एक सरल तरीका मा गर्नुभयो, सीधा ढोकामा ग्रिड gluing यो फर्नीचर को र केहि ह्यान्डल जोड्दै। तर यो मात्र संभावना छैन जब यो वार्डरोब रूपान्तरण गर्न को लागी आउँछ जस्तो कि तपाइँ माथिको छवि मा देख्न सक्नुहुन्छ; तपाइँ पनी ढोकाहरु लाई काट्न सक्नुहुन्छ र भांग को लागी काठ को हिस्सा प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, यस प्रकार कोठरी भित्र के छ को एक भावना प्राप्त गर्दै।
बिली / अक्सबर्ग बुकस्टोर
Ikea भन्छन् प्रत्येक5सेकेन्ड एक बिली किताब पसल बेचिन्छ संसारमा कहीं। एक प्रभावशाली तथ्य को बिचार, यसको अतिरिक्त, कि बिली बुकशेल्फ १ 1979 since since पछि फर्म को सूची मा भएको छ। आज यो पाठकहरु को लागी, तर पाठकहरु को लागी मात्र एक मनपर्ने विकल्प जारी छ।
गिलास ढोका संग बिली / अक्सबर्ग शेल्फिंग इकाई हाम्रो घरहरुमा भण्डारण ठाउँ बढाउन को लागी एक महान छनौट हो। 80x30x202 सेमी मापन, यो समायोज्य शेल्फ र एक ठूलो क्षमता छ। गिलासको ढोकामा ग्रेट्स जोड्दै यो पनि धेरै सरल हुनेछ, तपाईं लोन फक्स भिडियो मा देख्न सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह ग्रिड मा विवरण संग खेल्न सक्नुहुन्न र with खेल्नुहोस् तपाइँको घर को सजावट संग अधिक हड्ताल वा लगातार परिणाम प्राप्त गर्न को लागी। फर्नीचर को फ्रेम मा एक साधारण परिवर्तन, यो पुरा तरिकाले रूपान्तरण। के तपाइँ यी Ikea फर्नीचर ह्याक्स मनपर्छ? यी अरु पत्ता लगाउनुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » आफै गर » Ikea फर्नीचर र्याक वा भांग संग ह्याक